Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Kulankii Jaaliyada ASG ee Jarmalka
Kulankii Jaaliyada ASG ee Jarmalka
Marka hore waxan salaamayaa bahda warbahinta ilaahayna waan u mahadnaqayaa.
Waxa dhawaan Kulan telefoon isugu yimid jaaliyada gobolada ASG ee ku dhaqan Jarmalka, kulankaa oo lagaga hadlay arinta ka taagan degmada Saylac iyo magalaada taariikhiga ah.
Shirkan oo gogol xaadh u ahaa shir bisha labaad horaanteeda lagu qabanyo magalada Frankfurt ee dalka Germany waxa lagu xusay dhalintii ku dhimatay mudaharadki borama iyo lughaya iyo inti dhawacantay.
Waxa loo tacsiyeeyay waalidkii iyo qaraabadii ay ka baxeen, inta dhaawacanna waa loo duceeyay. Dhamaan masuuliyiintii shirkaa ka hadashay waxay waxay hoosta ka xariiqeen In sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo jaaliyad baladhan oo kulmisa dhaman jaaliyada gobolada ASG ee ku dhaqan Jarmalka.
Dadkii kulankaa ka hadlay waxa ka mid ahaa DR abdirahman abdilahi oo degan dalkan Jarmalka, isagoo kasoo qeybgalayaasha shirka ku booriyay in horumarka goboladan laga shaqeeyo.
Intaa kadib waxa loo hanblayeey 10 xildhiibaan ee ah cashara muba shiriin ta saylac iyo mayer ka masuulka xilkasnimada inta ba isu darsaday iyo dhalinyarta cusub iyo dhiigga cusub ee goboladan u kacay.
Waxa aad looga xumaaday aamuska aqoon yahahanka Samroon ee ku nool qurbaha Ee NUU iyo NAA midna laga haynin, Marka degaanada kale ee soomaalida ay wax ka dhacaanna BBC-da Iyo VOA-da soo raadsada ee sida roobka u da’a, ta dadkoodana ka xishooda.
Waatan Ruwaayadii La Magac Baxdey "Wakhtigu Ruux Lama Dhalan" Oo Uu Curiyey Abdirisaq Mohamed Barkhad. Waa riwaayad xambaarsan........ Kulan lagu taageeray Qaddiyada Saylac oo lagu qabtay Qaahira